Puntland oo mamnuucday noocyo kalluun oo loo dhoofiyo China (dhegayso) – Radio Daljir
Seteembar 20, 2017 2:21 g 0
Wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Puntland ayaa mamnuucday kalluumaysiga noocyo ka mid ah kalluunka oo aad loogu dhoofiyo dalka dibadiisa gaar ahaana wadamo ay ka mid tahay China.
Kulan kadhacay xarunta wasaaradda kalluumaysiga Puntland ee magaalada Bosaso ayaa lagu sheegay inay kalluumaysatadu soo jilaaban kalluunka nooca indha buurka oo ah nooc loo dhoofiyo dalka China lagana sameeyo saliid iyo libaax badeedka.
Wasaaradda ayaa sidoo kalle go’aamisay inaan lagu kalluumaysan shabaagaha nooca caagga ah.
Hoos kadhegayso sababta ay wasaaradda u joojisay iyo Xasan Heykal.
Ciidamada Kenya oo ka baxay Baardheere